Doorashada Trump dan ma u tahay Muslimiinta? – Maandoon
November 15, 2016 January 2, 2017 Abdullahi Dahir 0 Comment Cabdullaahi Daahir Deheeye
Donald J. Trump ayaa ugu danbayn ku guulaystay doorashadiiÂ sida wayn loo hadal hayay mudadii la soo dhaafay. Wuxuu ka guulaystay Hillary Clinton oo ahayd haweenay muddo badan ku soo jirtay siyaasadda dalka Maraykanka iyadoona ka soo qabatay jagooyin ama xilal waawayn sida marwada koowaad ee madaxwaynaha, mudanaha aqalka sare iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee dalkaasi Maraykanka
Trump waa guulaystay, waana jabiyay nidaamkii iyo muâ€™asasaadkii xukunka haystay. Wuxuu kaloo si xun u jabiyay warbaahintii sida eexda miidhan ah uladhaqantay. Sida lagu ogaaday raâ€™yi aruurin ay samaysay jaamacadda Quinnipiac 55% dadka Maraykanku waxay aamminsanaayeen in warbaahintu ay ka eexatay mudane Trump. http://www.washingtontimes.com/topics/quinnipiac-university/.
Dhanka kale, warbaahinta qaarkeed sida Newyork Times ayaa ka bixiyay cudurdaar warbixinnadoodii eexda ku dhisnaa, sida ay warisay shabakadda Truthfeed.com.Â Â WaxaynaÂ lumisay warbaahintaasu kalsoonidii qaar badan oo ka mid ah shacabka Maraykanka iyo kuwa dunidaba.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa ku kadsoomay, rumaystayna dicaayadaha ay ka faafinayeen mudane Trump warbaahintaasi. Waxayna u arkayeen in Trump oo loo doorto madaxwaynaha afartan iyo shanaad (45) ee dalka Maraykanku ay ahaan karto mid iyaga dhibaato ku keeni karta maadaama uu balan qaaday inuu Muslimiinta u diidi doono inay soo galaan dalkaasi Maraykanka in muddaa, isla markaana uu celin doono dadka sida sharci darrada ah ku jooga Maraykanka oo laga yaabo in Soomaali ay ka mid tahay. Soomaalida ayaa ka eegaysay arinta dhanka dhoofka oo Soomaalidu qaxootinimo ugu hijroodaan dalkaas si xad dhaaf ah. Waxaase lafilayaa in isbadal ku yimaada dunida ay sababto deggenaansho laga helo geyiga Soomaaliyeed oo looga maarmo magan-galyadoonka dhaqaale iyo mid deganaansho, maadaama lafilayo inuu qaato siyaasad cad oo aan ahayn midda kula-jire kaa-jirenimo ee hadda uu ku dhaqmo madaxwayne Obama, taasoo dunida ka abuurtay qalalaase iyo qolo-qolo ku duul aan danteedu cadayn.
Siyaasada Trump iyo saamaynteeda:
Intii lagu guda jiray olalihii doorashada ayuu Mr Trump sheegay inuu qaadayo tallaabooyinÂ loo arki karay inay saamayn ku yeelan doonaanÂ dunida inteeda badan. Arrimahan ayaa waxaa ka mid ahaa; inuu Muslimiinta ka mamnuuci doono inay soo galaan dalkiisa inta musâ€™uuliyiinta dalkiisu ay banaanka u soo bixinayaan waxa meesha ka socda oo uu ulajeeday Muslimiinta xagjirka ah.Waxaa kale oo uu sheegay in wadamada Sacuudi Carabiy, Japan, Germany iyo Koonfurta Kuuriya ay bixin doonaan lacag ammaankooda lagu sugo haddii kale ay masâ€™uuliyadda nabad-galyadooda dusha saaran doonaan. Waxaa kalooÂ uu ballan qaaday inuu badali doono amaba ka bixi doono dhammaan heshiisyadii Maraykanku la galay dunida inteeda kale ha ahaadeen kuwo ganacsi, ammaan, iyo cimilaba.
Hayeeshee, qorshihiisa siyaasadda arrimaha dibadda ayuuÂ mudane Trump ahmiyadda koowaad ku siinayaa danaha qaran ee dalkiisa, waana arrin dabiiciya in hogaamiyihu ka hor mariyo danta dalkiisa danaha kaloo dhan. Arrimaha ku saabsan la tacaamulka dunida iyo xoojinta danaha qaran ee Maraykanka waa kuwii gundhigga u ahaa ololihii doorashada ee Madaxwayne Trump sida uu ku sheegay hadal uu jeediyay taariikhdu markay ahayd 27 april 2016.
Qoraaga wayn ee carbeed Cabdilbaari Cadwaan ayaa qaba in ay Â adag tahay inuu wada fuliyo qodobada kor ku xusan, talooyin badanna ay u sooÂ jeedin-doonaan muâ€™asasaadka xukunka haya oo khilaafiddooduna ay ku keeni karto dhibaato wayn, sida in la shirqoolo iyo wixii la mid ah. Haddana waxaa lafilayaa arrimuhu inaanay ku socon doonin sidii hore, balse ay waxbadin isbadali doonaan.
Sida ay sheegtay idaacadda SomaliVOA, guud Â ahaan dadka Muslimiinta ee Ameerikaanka ah, gaar ahaan Soomaalidu waxay u codeeyeen Hillary Clinton oo ay door bidayeen inay u dhaami lahayd Donald J. Trump, waayo warbaahinta ayaa aad u buunbuuniyay Clinton, maadaama ay matalaysay nidaamkii qotada dheeraa ee laga adkaaday warbaahinta qudheeduna ay qayb ka tahay. Halka Trump ay u muujinayeen mid cunsuriyadu madax martay isla markaana neceb Muslimiinta iyo dadka madawba.
Haa Soomaalidu waa Muslimiin, waana dad madow, mana difaacayo Trump. Hayeeshee, Clinton inay u dhaami lahayd dadyowga Muslimka ahÂ Trump ayaa ah arrin ay adagtahay in la xaqiijiyo,waxayse u muuqataa inay uga dari lahayd sida haatan ay ku sugan yihiin. Sababtu waxay tahay, intii ay ahayd xoghayaha Arrimaha Dibadda afartii sano ee u horaysay maamulkii Obama, ayay qaadatay goâ€™aamo waxyeellayn wayn u gaystay qaybo ka mida dunida Muslimka sida rididdii Qaddaafi ee ay ka dhalatay burburka Liibiya, siyaasaddeedii Syria oo ay rabtay in madaxwayne Asad xoog lagu tuuro iyo u codaynteedii weerarkii Ciraaq Maraykanku ku qabsaday, sida uu ku qoray Michael Brenner shabakadda Huffingtonpost maruu ka jawaabayay in Hillary Clinton ay ahayd qof dagaal u oomman..
Dhanka kale Trump waa nin banaanka ka joogay muâ€™asasada xukumaysay Maraykanka muddada dheer, baâ€™a, hoogga Â iyoÂ argagixisadana u sababay dunida. Waxaana lafilayaa inuu is afgaradÂ dhexdhigi doono dalalka Maraykanka iyo Ruushka oo xiriirkooda diblomaasiyadeed ay sii xumeeyeen arrimaha ka taagan Bariga Dhexe. Arrintani waxay keeni kartaa in khilaafaadka bariga dhexe yaraadaan amaba dhinac laysku raaco. Waxaa intaa dheer, inÂ madaxwayne Trump uu sheegay intii uu ku gudajiray olalihii doorashada, inuu dhexdhexaad ka noqon-doono khilaafka guunka ah ee u dhexeeya Carabta iyo Israaâ€™iiliyiinta, gaar ahaan arrinta Falastiin.
Guntii iyo gaba gabdii, madaxwaynaha ladoortay ee dalka Markaynka mudane Donald J. Trump ayaa lafilayaa inuu dajin doono xaaladaha kacsan ee dunida kataagan, gaar ahaan Bariga Dhexe ballan qaadkiisii iyo isagoo ah qof dibadda kajoogay waxa looyaqaanno establishment ga oo loola jeedo siyaasiyiinta talada dalku gacantooda kujirtay haba kala duwanaadeene, iyo Â xiriirka fiican ee uu laleeyahay mudane Buutinka dalka Ruushka awgeed ,kadib markuu ka adkaaday muâ€™asasadii dalkaasi xukumaysay. Waxa kaloo lafilayaa inuu si dhaba u la dagaalami doono argagixisada, nidaamka isku dirka iyo laba-wajiilayntana soo afjarmi doono. Waana in aan ogaanno in mudane Trump uusan xafiiska xabbad ku imaan ee uu ku yimid warqadda codaynta, taasina waa macnaha dimoqraadiyadda, waana in la tixgeliyo dimoqoraadiyadda iyo doorashada shacabka Maraykanka ee Trump u doortay in uu hoggaamiyo afarta sano ee soo socda.
Waxaan sugnaaba waa bilaha fooda inagu soo haya iyo wejiga siyaasadda dunidu ay yeelato.
Cabdullaahi Daahir Deheeye
← Islaamka aan doonayno waa noocee? Sh. Cabdiraxmaan Shariif
Ma Dhab Baa In Carabtu Gabdhaha Nolol Ku Aasi Jireen? (Bandhig buug) →
October 21, 2016 Shaafici Xasan Maxamed 0